Articles Published in 2017 | Sagal Radio Services
Al-shabaab oo toogasho ku dishay darawal waday gaari kuwa Qaadka ah degmada Buula-burte
Xoogag ka tirsan ururka Al-shabaab ayaa lagu waramayaa in subaxnimadii hore ee saakay toogasho ku dileen mid ka mid ah ganacsatada Qaadka oo lagu magacaabi jiray Yuusuf Cabdi deegaanka Jameeco oo ka tirsan degmada Buula-burte.
Shaqaale Soomaali ah oo loo daabuliyo dalka Sacuudi Carabiya
Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa dhawaan bilaabeysa daabulida 10,000 oo shaqaalo Soomaali ah, kuwaasi oo si sharciyeysan kaga shaqeyn doono magaalooyinka dalka Sacuudiga.
Axmed Madoobe “Doorashadan wey ka dhaqaalo badan tahay, weyna ka lagdan adag tahay kuwii hore”
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, ayaa dardaaran u jeediyay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka kuwaasi oo sanadkaan dooranaya madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka.
Guddoomiyaha gudiga doorashada baarlamaanka oo faah faahin ka bixiyay howlahooda shaqo
Guddoomiyaha gudiga doorashada guddoonka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Dr C/raxmaan Ducaale Beyle, ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay howlaha shaqo gudiga doorashada uu madaxda ka yahay.
Sheekh Shariif, C/qaadir Cosoble iyo Tarsan oo kulan gaar ah Muqdisho ku yeeshay (Sawiro)
Sagal Radio Services • News Report • January 4, 2017
Kulan saacado qaatay ayaa dhexmaray qaar kamid ah musharixiinta ugu cad cad sanadkaan, waxaana kulanka uu ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
Askarigii dilay taliye ku xigeenkii ilaalada madaxtooyada oo gacanta lagu dhigay
Saraakiil ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa xaqiijisay in gacanta lagu dhigay askarigii ka dambeeyay dilka taliye ku xigeenkii ciidamada ilaalada madaxtooyada Soomaaliya.